Uchwepheshe we-Semalt Uqamba Nge-Caldera Form, I-Plugin Enamandla Kunazo Zonke Zezindawo Zama-WordPress
Ifomu lokuxhumana logaxekile liyakucasula futhi licasulayo futhi lidala izingozi eziningi zokuphepha kubhulogi yakho noma iwebhusayithi. Ngakho-ke, ukuvimbela ugaxekile nokugcina ifomu lakho lokuxhumana liphephile kufanele kube okubaluleke kakhulu uma usebenzisa amafomu e-Caldera. U-Artem Abgarian, i- Semalt iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Omkhulu, uchaza ukuthi ukuze unike amandla izinhlelo ezinamandla zokulwa nogaxekile ezinamafomu okuxhumana, kufanele uqale ukwakha ifomu elisha ngokuphelele. Uma usuqedile, ithuluzi lokulwa nogaxekile lizosebenza ukugcina amafomu akho mahhala kusuka kugaxekile nokuhlaselwa kwe-bot.
Yini okufanele uyenze uma uthola ugaxekile ngamafomu e-Caldera?
Uma usebenzisa i-plugin yama-root okuzenzakalelayo ngama-Caldera Amafomu futhi ayisebenzi kahle, kunezindlela ezithile zokususa ugaxekile ngokushesha:
Okokuqala, kufanele ukhethe ukusebenzisa i-blocker ye-WordPress ephethwe kahle futhi ehleliwe eqinisekisa ukuvimbela wonke amabhubhu nezinsipho ekufinyeleleni kuwebhusayithi yakho. Siphakamisa ukuthi usebenzise i-WPEngine ne-Pantheon kule ndaba.
Ungasebenzisa futhi amasevisi we-imeyili avimba ngokuzenzakalelayo ugaxekile. Siphakamisa ukuthi i-Caldera Forms Pro yamaFomu e-Caldera ne-SendGrid kuwo wonke amanye ama-imeyili..
Ukusebenzisa i-plugin yokulwa nogaxekile kuhle ukuhamba nayo. Kukhona amakhulu ezinkulungwane zama-plugin e-anti-spam ku-Directory yakho ye-Wordpress Plugin, futhi ungakhetha i-plugin efanele futhi uwafake ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Kuthiwani ngensimu yeReCaptcha?
Kuhle futhi ukuthola i-RecCaptcha futhi uvimbele ukuphawula kogaxekile kuwebhusayithi yakho. Lokhu kungase kungasebenzi kahle ngamafomu e-Caldera ngakho kuzomele ulungise izilungiselelo zayo ngesandla. Kuphephile ukusho ukuthi i-reCaptcha ayisebenziseki kangcono futhi ewusizo kunamapulagizi aphikisana nogaxekile okukhulunywe ngezansi.
Amafomu e-Caldera Anti-Spam:
Uma unayo iwebhusayithi ye-WordPress, kufanele ufake le plugin ngokushesha ukuvimbela amafomu e-Caldera kusuka kugaxekile namagciwane. Le iplagin yomsebenzisi-friendly futhi website-friendly ukuthi mahhala izindleko futhi iza nezinqwaba izici. Ukusebenzisa, ungathola ukufinyelela emiyalweni enemininingwane yokuthi ungakha kanjani ifomu elihle lokuxhumana. Le plugin inikeza abakhi befomu be-drag-drop-drop, izinketho zokubukwa kuqala ezibukhoma, izifanekiso zokusheshisa ukudala ifomu, futhi kusiza ukwakha amafomu aphendule ngemizuzwana.
I-Talk Clean Anti-Spam:
Le plugin ye-WordPress ingahlanganiswa namafomu wakho we-Caldera kalula futhi isiza ukuvimbela ogaxekile kuzigaba zokuphawula. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi ifika kokubili izinguqulo zamahhala nezama-premium; kusho ukuthi le nguqulo yamahhala inhle kumabhizinisi amancane namabhulogi angasese kanye ne-premium version inkulu kumawebhusayithi amakhulu kanye nemikhiqizo ye-intanethi. Ukukhethwa Kwendlela Yokwenza I-Gravitation kungenziwa amandla ukuhlela amafomu akho akhona bese ubanika ukubukeka okunamandla futhi okungavamile.
Izinyosi zokulwa nogaxekile:
I-plugin ye-WordPress ephelele futhi ewusizo yamafomu we-Caldera. Inikeza izinsiza zamahhala zokulwa nogaxekile futhi inezigidi zokufakwa okusebenzayo kwi-intanethi. Ifomu Lokuxhumana 6 lingabuye lihlelwe besebenzisa le plugin, futhi iyasebenza. Ngaphezu kwalokho, kunezinqwaba zezandiso ezitholakalayo kubasebenzisi, futhi ungenza ngokwezifiso le plugin ngokwezidingo zakho kanye nokulindela. Kuhlanganisa ukusekelwa kabusha kwe-reCaptcha futhi kungasingatha ukuthunyelwa kwefomu le-Ajax-powered ngawe Source .